PaExoSpecial, chimwe chezvatinokoshesa kuvanzika kwevashanyi vedu. Gwaro iri reChakavanzika Policy rine mhando dzeruzivo rwunounganidzwa nekurekodhwa neExoSpecial uye mashandisiro atinoita. Kana uine mibvunzo, tapota usazeza kutibata nesu.
Iyi Yakavanzika Policy inoshanda chete kune edu epamhepo zviitiko uye inoshanda kune vashanyi vewebhusaiti yedu maererano neruzivo rwavakagovana uye / kana kuunganidza neExoSpecial. Iyi mutemo haishande kune chero ruzivo rwakaunganidzwa kunze kwenyika kana kuburikidza nechiteshi kunze kweiyi webhusaiti.
Nekushandisa yedu webhusaiti, iwe unobvumirana kune yedu Yavanzika Policy uye unobvumirana nemitemo yayo.
Isu hatiwanzo kubvunza vashandisi chero ruzivo rwemunhu. Nekudaro, kana tadaro, ruzivo rwemunhu rwaunokumbirwa kuti upe, uye zvikonzero nei uchikumbirwa kuti uupe, zvichajekeswa kwauri panguva yatinokumbira kuti upe ruzivo rwako pachako.
Kana iwe ukabatana nesu zvakananga, tinogona kugamuchira ruzivo rwakawedzera pamusoro pako senge zita rako, kero yeemail, nhamba yefoni, zviri mukati meseji uye / kana zvawakanamira zvaungatitumire, uye chero humwe ruzivo rwaungasarudza kupa.
Isu tinoshandisa ruzivo rwatinotora munzira dzakasiyana siyana, kusanganisira ku:
Govera, shandisa, uye chengetedza yedu webhusaiti
Natsiridza, gadzirisa, uye wedzera yedu webhusaiti
Gadzira zvigadzirwa zvitsva, masevhisi, maitiro, uye basa
Taurirana newe, zvakananga kana kuburikidza nemumwe wevatinoshanda navo
Tumira maemail, mameseji mameseji kana tsamba chaiyo
Tsvaga uye kudzivirira kushandiswa kwechitsotsi kana zvisiri pamutemo kwewebhusaiti yedu
ExoSpecial inotevedzera yakajairwa maitiro ekushandisa mafaira elogi. Aya mafaera anochengeta vashanyi pavanoshanyira mawebhusaiti. Makambani ese anotambira anoita izvi uye chikamu chekutambira masevhisi 'analytics. Ruzivo rwunounganidzwa nemafaira elogi runosanganisira internet protocol (IP) kero, mhando yebrowser, Internet Service Provider (ISP), zuva uye chitambi chenguva, mapeji ekunongedzera/kubuda, uye pamwe huwandu hwekudzvanya. Izvi hazvina hukama kune chero ruzivo rwunozivikanwa iwe pachako. Chinangwa cheruzivo ndechekuongorora mafambiro uye kugadzirisa saiti.
Kufanana nedzimwe webhusaiti, ExoSpecial inoshandisa 'makuki'. Isu hatikumbiri mvumo yako yekushandisa makuki. Aya makuki anoshandiswa kuchengetedza ruzivo kusanganisira zvido zvevashanyi, uye mapeji ari pawebhusaiti akawanikwa kana nemuenzi. Ruzivo urwu runoshandiswa kukwenenzvera ruzivo rwevashandisi nekugadzirisa yedu yewebhu peji zvemukati zvichienderana nevashanyi' browser mhando uye/kana rumwe ruzivo.
Isu tinoshandisa kushambadza kuita mari ExoSpecial. Vamwe vevashambadziri pasaiti yedu vanogona kushandisa makuki uye mabhikoni ewebhu. Mumwe nemumwe wevatinoshanda navo vanoshambadza vane yavo Yakavanzika Policy yemitemo yavo pane data yemushandisi.
Kushambadzira Partner Zvemutemo Zvekuvanzika
Ziva kuti ExoSpecial haigone kuwana kana kutonga pamusoro pemakuki aya anoshandiswa nevashambadziri vechitatu.
CCPA Kodzero Dzezvakavanzika (Usatengesa Rangu Rangu ruzivo)
Pasi peCCPA, pakati pedzimwe kodzero, vatengi veCalifornia vane kodzero yeku:
Kumbira kuti bhizinesi rinounganidza data remutengi riburitse zvikamu uye zvidimbu zve data rako pachako izvo bhizinesi rakaunganidza nezvevatengi. Kumbira kuti bhizinesi ribvise chero data rako pachako nezvemutengi iro bhizinesi rakaunganidza. Kumbira kuti bhizinesi rinotengesa data remutengi, kwete kutengesa data remutengi.
Kana iwe ukaita chikumbiro, isu tine mwedzi mumwe wekukupindura kwauri. Kana iwe uchida kushandisa chero awa kodzero, tapota taura nesu.
Chimwe chikamu chezvatinokoshesa kuwedzera dziviriro kuvana pavanenge vachishandisa internet. Tinokurudzira vabereki nevachengeti kuti vacherechedze, vatore chikamu, uye/kana kuona nekutungamira zvavanoita pamhepo. ExoSpecial haiunganidzi chero Ruzivo Rwako Runozivikanwa kubva kuvana vari pasi pemakore 13 vachiziva. Kana iwe uchifunga kuti mwana wako akapa ruzivo urwu pawebhusaiti yedu, tinokukurudzira kuti utibate nekukurumidza uye tichaita zvatinogona kuti tibvise nekukurumidza. ruzivo rwakadaro kubva muzvinyorwa zvedu.
Kune chero mibvunzo ine chekuita nepolicy iyi kana chero maitiro edu ekuvanzika, ndapota taura privacy@exospecial.com chero nguva.